स्पाइडर मोनिकाले आफ्नो तिघ्रा देखाउँदै दिईन यस्तो पोज! केहि अनसिन फोटोहरु सहित… – PathivaraOnline
Home > बलिउड > स्पाइडर मोनिकाले आफ्नो तिघ्रा देखाउँदै दिईन यस्तो पोज! केहि अनसिन फोटोहरु सहित…
admin January 21, 2022 बलिउड, मनोरञ्जन, रोचक 0
एजेन्सी । अभिनेत्री मोनिकाले १९९० को फिल्म इमर्जेन्सी पुलिस १०० बाट बाल कलाकारको रूपमा आफ्नो तमिल फिल्ममा डेब्यु गरेकी थिइन्। अभिनेत्री मोनिका तिरुनेलवेली अहिले ३२ वर्षकी भइन् ।
उनले आफ्नो स्क्रिन विश्व क्यारियर बाल कलाकारको रूपमा सुरु गरे र तमिल फिल्महरूमा केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि प्रसिद्ध छन्। यसबाहेक उनले केही चलचित्रमा नायकको भूमिकामा अभिनय गरेर आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयलाई उजागर गरेका छन् । सन् २००२ को सुन्दर फिल्ममा सबैभन्दा कान्छो कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गरेर उनी फ्यानहरूमाझ निकै लोकप्रिय भए ।
यसबाहेक, फिल्मको संग्रहमा ठूलो इतिहास छ। यस फिल्मपछि उनले जुनियर कमाण्डर विजय अभिनीत चलचित्र भगवतीमा अभिनय गरे र चर्चित हास्य कलाकार भादिवेलु अभिनीत चलचित्र ‘इम्साई आरासन २३ औ पुलिकाची’ मा वासन्तीको भूमिका निर्वाह गरेर दर्शकको ध्यानाकर्षण गरे ।
यसरी तमिल फिल्ममा अभिनय गरेकी अभिनेत्री मोनिकाको जीवनमा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको फिल्म स्पाइडर थियो, यही फिल्मबाट उनलाई स्पाइडर मोनिका भनिन्छ । त्यति मात्र होइन, उनले यस फिल्ममा आफ्नो क्लाइमेक्स देखाइन् र यसबाट फ्यानमाझ छाप छोड्ने अभिनेत्री बनेकी छिन् । यसरी चर्चित अभिनेत्री केही समयको लागि अचानक बेपत्ता भए। उनलाई केले जित्यो भनेर अध्ययन गर्दा बिहेकै कारण चलचित्र छाडेको खुलासा भयो ।
त्यति मात्र होइन, उनले बिहे गर्ने बेहुलाले इस्लाम धर्म मान्ने भएकाले त्यही धर्मको पालना गर्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले अहिले आफ्नो नाम पनि परिवर्तन गरेका छन् । हाल उनको नाम बदलेर रहिमा राखिएको छ । तर अहिले चर्चित नायिका के गरिरहेकी छिन् र अहिले कहाँ छिन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस्तो अवस्थामा धेरैले नदेखेका उनका केही तस्विर इन्टरनेटमा ट्रेन्डिङ भइरहेका छन् । हेर्नहाेस्
सादा जीवन उच्च विचार: टायर माथि टायलकाे टेवल, हरिवँशको यो फोटो भयो भाइरल!